တရုတ်စဉ်ဆက်မပြတ် hydrostatic ပိုးကင်းစနစ်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | Dingtaisheng
အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများကိုအဓိကခန္ဓာကိုယ်၊ အခြေ၊ လည်ပတ်မှုပလက်ဖောင်း၊ ပိုက်စနစ်၊ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်အထုပ်အပေါက်များနှင့်ထွက်ပေါက်စနစ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပစ္စည်း၏အဓိကကိုယ်ထည်ကိုမတူညီသော module အမျိုးမျိုးအုပ်စုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး module တစ်ခုစီတွင်အခေါင်းများစွာရှိသည်။ အခေါင်းပေါက်များအားလုံးကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ ၎င်းတို့သည်အပူတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဖိအားပေးခြင်းနှင့်ပိုးသတ်ခြင်းနှင့်ဖိအားပေးခြင်းတို့လုပ်ဆောင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများသည်ကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်ခြင်းယန္တရားတစ်ခုလုံးအားပစ္စည်းတစ်ခုလုံးမှတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းများအားမောင်းနှင်သည့်အခါပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပြီးဆုံးသွားနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နောက်သို့ပါ ၀ င်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာ၏အလုပ်လုပ်မှုနိယာမမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ရေကိုထိုးသွင်းသည် သတ်မှတ်ထားသောအာကာသထဲသို့၊ ရေကော်လံကိုမြင့်မားသောနှင့်အနိမ့်အရည်အဆင့်သို့ဖိအားများမှတဆင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤသို့ဖြင့်ထုတ်ကုန်ကိုအဆင့်ဆင့်ဖိအားတိုး။ လျှော့ချနိုင်ပြီးဖြတ်သန်းသွားသောအခါတစ်ချိန်တည်းအပူချိန်တိုးလာသို့မဟုတ်လျှော့ချနိုင်သည်။ လိုင်တစ်ခုချင်းစီ, ထို့ကြောင့်တစ်ခုလုံးပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးပါက။
စဉ်ဆက်မပြတ် hydrostatic ပိုးကင်းစနစ်၏အားသာချက်များ
1. အားကောင်းတဲ့ဘက်စုံသုံး, ကျယ်ပြန့် applications များ
3. မြင့်မားသောအပူချိန်ပိုးသတ်နှင့် Pasteur နှင့်အတူသဟဇာတ
4. ကောင်းသောပိုးသတ်အချိန်, တံဆိပ်ခတ်ထုတ်ကုန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲပိုးသတ်နိုင်ပါတယ်
၅။ အလိုအလျောက်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခြင်း၊ မြင့်မားသော volume အသုံးပြုသူများအတွက်သင့်တော်သည်။
ရှေ့သို့ အလိုအလျောက် Batch Retort စနစ်